Rindrambaiko alim-baravarankely RF | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
RF fanatobiana alim-borona
Heating Aluminium Foil ho an'ny Sealing Cap
Induction Heating Aluminium Foil Ho an'ny famehezana cap miaraka amin'ny heater inductive IGBT
Tanjona Heater induction dia ampiasaina hanefana foil vita amin'ny aliminioma vita amin'ny polymer ao anaty 0.5 ka hatramin'ny 2.0 segondra. Ny hafanana vokarin'ny foza vita amin'ny aliminioma dia mampiempo ny polymer izay mifamatotra amin'ny vozon'ny fitoeran-javatra plastika.
Fitaovana Aluminium foil, polyethylene, polypropylene, polyvinylchloride, polystyrene, polyethylene terephthalate, acyrlonitrile styrene
Temperature 300 - 400 (ºF), 149 - 204 (ºC)
Frequency 50 ho 200 kHz
Fitaovana fampidinana herinaratra fampidiran-ketra DAWEI miasa eo anelanelan'ny 1 & 10 kW amin'ny haavo 50- 200 kHz. Ireo singa ireo dia miasa miaraka amina loha famehezana lavitra izay mamela ny kabinetra tena ilaina amin'ny fitaovana hita lavitra ny faritra famokarana eo noho eo. Azo atao ny halavirana hatramin'ny 100 metatra. Ny microprocessor dia ampiasaina hifehezana
ary arovy ny rafitra ary miantoka fa ny faharetan'ny asa tsara indrindra dia voatazona amin'ny fotoana rehetra sy isaky ny kaontenera
dia mandray ny angom-pihariana hafanana avy any amin'ny bisikileta.
Fomba roa misy karazana lamina vita amin'ny alimina aluminium misy amin'ity fampiharana ity. Ny fivoriambe voalohany dia misy ny fanohanana
birao / famerenana indray, sosona savoka, foil aluminium, ary horonantsary heatseal ho an'ny rafitra tohana (sary 1). Ny fivoriambe faharoa dia misy sarimihetsika maripana avo lenta, foil aluminium ary sarimihetsika heatseal ho an'ny rafitra tsy tohanana (sary 2). Ny fomba fanao dia ny fampidirana ny fonosana foil ao anaty satrony ary ny fampidirana ny satrony amin'ny fitoerany aorian'ny famenoana ny vokatra.
Valiny Ho an'ny fanangonana foil aluminium toy ny hita amin'ny sary 1, hafanana nampidirina tao anaty foil metaly tamin'ny coil induction
atsonika avy hatrany ny firakotra polymer sy ny vozon'ny fitoeran-javatra mamorona tombo-kase hermetika eo anelanelan'ny sarimihetsika famehezana hafanana
ary ny sisin'ny kaontenera. Ny hafanana koa dia mampiempo ny savoka eo anelanelan'ny foil aluminium sy ny tabilao any aoriana. Ny savoka dia
variana ao amin'ny solaitrabe aoriana. Izany dia miteraka fifamatorana mafy eo anelanelan'ny foil / membrane aluminium sy ny sisin'ny
fitahirizana, ny bara back dia navoaka ary mijanona ao anaty cap.
Process (contd) Raha misy fonosana tsy voaroaka ao amin'ny sary 2, ny lafiny iray amin'ny volafotsy alimina dia mifono sarimihetsika polymer azo fehezina hafanana ary ity tarehy ity izay hifandray sy hamehezana ny kaontenera. Ny ilan'ny foil hafa izay hifaneraserana amin'ny satrony dia misy sarimihetsika miempo ambony miempo izay manakana ny fametahana ny alimona amin'ny satroka mamela ny mpampiasa farany hamaha ny satrony. Ny fonosana tsy manohana dia matetika ampiasaina ao izay ampiasain'ny mpampiasa farany ilay fononteny hita maso alohan'ny famoahana ny vokatra. Ny foza vita amin'ny aliminioma dia miaro toy ny etona manara-maso ny fihavanan'ny vokatra ary manakana azy tsy ho maina.
Sokajy Technologies Tags Heating Foam Aluminium, fantson-tampon'ny tampon'ny haavo, Fitaovana fanodikodinana fanindroany, RF fanatobiana alim-borona